Nzvimbo Inoyevedza Iri Zvese Zvechinyakare Uye Zvechimanjemanje, Kugara Nhaka Yekunakidzwa Kwekumabvazuva｜Millo Reflections - Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
musha / Interior design / Nzvimbo Yakashongedzeka Iyo Yakave Yechinyakare Uye Yemazuva Ano, Kugara nhaka Charm YeEast - Millo Reflections
Nzvimbo Yakashongedzeka Iyo Yakave Yechinyakare Uye Yemazuva Ano, Kugara nhaka Charm YeEast - Millo Reflections
2021 / 08 / 08 kupatsanuraInterior design 3998 0
Nyaya iyi yakatangwa neimwe yemifananidzo gumi yekuChina ine mukurumbira, "Zviuru zveMaRwizi neMakomo" naWang Ximeng weNorth Song Dynasty. Mumufananidzo, rwizi rwakakura, makomo ari kuderera, musha wehove, pavilion, imba yehuswa uye zambuko refu. Dzese dzakatsanangurwa uye dzakafanana neupenyu, nekudaro dzinoita mbiri yakanaka yemamiriro epasi eJiangnan. Nekudaro, isu tinoshandura tsinga dzeheirloom pendi mumitsara ine simba yenzvimbo. Pakati peguta, takapenda nzvimbo yechisikigo ine chiuru chemakore ehumunhu semashure. Iyo inobvumidza vanhu vanofamba kuburikidza nebusy reguta kuti vanyurwe mune inoyevedza uye yekare mamiriro ekunze pasina kurasikirwa neazvino uye hunyanzvi kubva padanho rekutanga mairi. Inopa vanhu pfungwa yekuve vekutanga pakuona. Kubaya jekiseni remukati mevanhu uye hunyanzvi kugadzira nzvimbo inogara hupenyu uye aesthetics.
Dhizaini yemukati yanhasi haingodi chete kutarisana nekugadzirisa zvinoda kushanda senge zvekunzwa uye ruzivo, asi zvakare ine basa retsika nhaka uye kufambiswa kwenguva. Iyo yekare tsika tsika, iko kwekunamata kwekutsvaga literati uye echinyakare Chinese aesthetics zvakasanganiswa pamwechete kugadzira symbiotic uye yakanakisa nzvimbo iri yekare neyemazuvano.
Nemavara ekugadzirwa kwazvino, dhizaini anotora iyo isingabvumirwe yehunyanzvi fomu yeinjini yekumabvazuva uye wogeza kuumba nzvimbo inoyevedza inosanganisa tsika yechinyakare zvinoreva nehupenyu hwanhasi. Iyo yakajeka yekumashure madziro yakashongedzwa neinki uye nzvimbo mipumburu. Iyo yakasviba, yakajeka, nhema uye chena zvakangonaka, inononoka zvishoma yegreenery. Runyararo rwekumabvazuva uye kufungidzira uye kupinza kwemazuva ano uye kupenya zvinowirirana zvichipindirana kuita chimwe.
Iyo sandbox nzvimbo ine yakavhurika dhizaini. Iyo rimi-uye-groove arch chimiro kumusoro kwepamusoro chinoratidzira iyo Chinese hwindo ruva, ichipa iyo nzvimbo yacho yemazuva ano yekumabvazuva aesthetic runako.
"Zviuru zveMirairi yeMakomo neMakomo" zvakakomberedzwa nemakomo mudenga, zvichiratidza mwenje nemumvuri. Rwiyo rwakareba uye zvarinoreva zvinosvika kure.
Nzvimbo yekutaurirana yakadzikama uye inoyevedza, ichienderera nekunyora kumabvazuva. Iyo dhizaini inogadzira iyo yechinyakare Chinese tsika uye mweya neazvino dhizaini mutauro. Urongwa hwezvigadzirwa, kupatsanurwa kwezvinhu, kuratidzwa kwemafomu uye zvigadzirwa. Zvese zvese zvinotaurira zvinoreva Chinese tsika.
Iyo nzvimbo yakaenzana uye yakadzikama, yakapusa uye yemuchadenga. Hupfumi hwekumabvazuva hunoratidzwa panguva ino. Kubatanidzwa kwezvinhu zvesimbi kunopa nzvimbo yacho hunyanzvi hwakati wandei uye hwakanakisa, hunopenya asi husina hunhu, pasina nzira dzekutaura. Iyo inodhonza iyo aesthetics kudzokera kune yazvino mamood uye inorerutsa mamiriro emuchadenga.
Makomo nenzizi zvinotambanuka muchiedza nemumvuri, senge chaiye uye zviripo, zvine chinangwa chekuita uye chizere nemutinhimira. Inoita kuti pfungwa dzinoonekwa dzive dzakabatana uye dzinounza pfungwa yekunaka kwekuona uye maitiro.
Iyo inogadzira nzvimbo yemuchadenga iri yekare neyemazuvano, ichigadzira inonyudza yekunzwa ruzivo. Munzvimbo yakasarudzika yekumabvazuva kwevanhu, unogona kupukunyuka kubva kune runako, kutiza kubva kumhanyi uye kuchenesa pfungwa dzako. Iwe unogona kunzwa iko kunzwisiswa nenzvimbo, kunzwa runyararo rwekanguva, uye kuratidza wakasununguka uye wakasununguka kumabvazuva kwevanhu hunhu.
Mwedzi wakajeka unopenya pakati pemipine, uye tsime rakajeka rinoyerera padombo. Mukugadzirwa kwetiyi bhaa, iyo dhizaini inoshandura zvinhu zveinki nemamiriro ekunze kuburikidza nehunyanzvi uye husingaoneki bhurasho uye fungidziro yekugadzira, zvichichinja kuomarara kuve nyore. Iyo inogadzira yakasarudzika uye yakasununguka kumabvazuva kuvharirwa, ichipa vanhu kuona "kunyarara" uye "kuchena". Iko kune yakapusa uye yakajeka gomo uye zvishongo zvematombo, yekare uye yakashongedzwa bhuku kadhi dhizaini. Ingi nemvura inodzungaira mune hunyengeri hwenzvimbo. Iwo chaiwo neanofungidzirwa anoenderana neumwe, uye mweya weZen uzere.
Iyo nzvimbo yakapfuma mune ruzivo uye inokudzwa mumhepo. Chimiro cheChinese chizere nerunako. Nzvimbo yega yega inochengetedza kubatana, asi zvakare inopa kuzvimiririra kwakasiyana uye kuvanzika neiyo imwechete nzvimbo mutinhimira. Inodhirowa muchiitiko chinyararire, ichiratidza mamiriro ekuvhara. Iyo inzvimbo yekumabvazuva yemhando yepamusoro. Iyo inobvumira vatengi kuona akasiyana manzwiro munzvimbo uye inopa yakawanda kuenderera uye kusiana kune iyo nzvimbo.
Pine uye plamu, bamboo, nzira nhatu asi zvine chikafu. Zvakaoma kunyengedzwa nechando nechando kana ukasakwegura nekuoma.
–Wang Mingsui (Rwiyo)
Mugadziri akanyorwa chakasimba chekumabvazuva munzvimbo. Idzo shamwari nhatu dzegore, plum, paini uye bamboo. Iwo ndiwo anodikanwa ezvinyorwa mumazuva ekare, uye akabatanidzwa mune yazvino nzvimbo dhizaini sekupedzisa kubata. Pakati penzvimbo yakatenderera uye yakatenderera, yakajairwa uye yekuzvibata, inogadzira yekuzorora yekumabvazuva mamiriro emakomo, masango uye mapindu.
Iyo yekuteerera-yekuona imba yakavhurika uye yemuchadenga. Nzvimbo yevana yakagadzirirwa nevaraidzo uye kugarika kwevana mupfungwa. Musuwo wekuruboshwe newindo rerudyi unopa mwenje wakajeka uye wakajeka. Iyo dhizaini inoteera mamiriro ekusimbisa mitsara, uye inoshandisa mwenje inodziya mavara kuomesa iyo grey huni ruvara. Izvi zvinonakidza pasina kurasikirwa nepfungwa yemhando yepamusoro. Iyo dhizaini inoenderana nepfungwa yemutsara, uye mwenje unodziya ruvara unoshandiswa kurerutsa grey huni ruvara.
Zita reProjekiti ｜ CRC-Lingnan Mansion Yekushambadzira Center
Rudzi rweProjekiti ｜ Sales Center
Yakapfava yekudyara unit, Millo Image
Nzvimbo yePurojekiti ｜ Chenzhou, Hunan
Nzvimbo yePurojekiti ｜ 1080㎡
Zuva Rokupedzisa ｜ 2020.08
Yakakosha yekutenda kuChina Railway, Tairong Real Estate
Miro Reflections, yepamusoro-kumagumo yakapfava inogovera aesthetic brand
Millo Reflections ndeye hunyanzvi-inotungamirwa yepamusoro-kumagumo yakapfava inogovera aesthetic brand. Inotarisa pakupa zvakadzama, zvakakwana uye zvine hunyanzvi hwepamusoro-soro hunyoro hwekugadzira dhizaini uye zvigadzirwa zvekushandisa masevhisi senzvimbo dzakasarudzika dzimba dzevanhu, dzimba dzemumisha, dzimba dzekuratidzira, mahofisi ekutengesa, mahotera uye makirabhu. Kubva payakavambwa, yakabudirira kugadzira nzvimbo dzakanaka dzekugara munyika, uye yakazvipira kuve wekutanga mhando yezvinyoro zvekugadzira dhizaini kuChina.
Millo Image inotora "dhizaini inovakazve hunyanzvi hwekugara" sechinhu chakanakisa, inotora mutengi senzvimbo, inoremekedza izvo chaizvo zvinodiwa uye zvingangoita manzwiro evanhu uye nzvimbo ontology. Isu tinopa iyo nzvimbo chirevo chevanhu uye kuratidza mararamiro akanaka. Isu tinorega basa rega rega riine tembiricha yayo uye kukosha kwayo.
Pakapfuura :: 172 Mamita Mamita Bookish Villa, Iyo Dudziro Yekunze YeRogi Uye Muchena | Yunxing Dhizaini Zvadaro: Iyi OPEN Space Inogutsa Zvese ZvePfungwa Dzako. Iyo Yakazara Ne "Nzvimbo Dzakavanzwa"
2021 / 08 / 15 3303
2021 / 08 / 15 4212
2021 / 08 / 15 3710
2021 / 08 / 14 3453
2021 / 08 / 14 3859
2021 / 08 / 14 3255